Motivation for success :: आजसम्म कमाएको सम्पति राज्यलाई दिने स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको घोषणा, कति छ उनको सम्पति ?
आजसम्म कमाएको सम्पति राज्यलाई दिने स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको घोषणा, कति छ उनको सम्पति ?
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, साउन २९ २०७८
काठमाडौँ – स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आजसम्म कमाएको सम्पति सरकरलाई बुझाउने घोषणा गरेका छन् । उनले आफूले कमाएको आधा सम्पति सरकारलाई दिने घोषणा गरेका छन् ।
अबौँका मालिक श्रेष्ठले ५० वर्षदेखि लगानी मात्रै गरेर सम्पति कमाउन लागेकाले अब आफूले कमाएको पैसा राज्यलाई सहयोग गर्ने बताएका हुन् । उनले आफूले कमाएको सम्पति फाउण्डेशन बनाएर सरकारलाई दिने घोषणा गरेका हुन् ।
ईमेज टेलिभिजनको हटसिटमा कुरा गर्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले राज्यबाट भ्रष्टाचार गरेर लिने आफ्नो कुनै चाहना नभएको स्पष्ट पारे । अविवाहित भएकाले आफूलाई कुनै सम्पतिको लोभ नभएको उनको भनाइ छ ।
कोरोना संक्रमण भएपछि एक्लै बस्नुपरेकाले सम्पति भन्ने के नै रहेछ र भन्ने लागेकाले अबका दिन जनताको सेवामा लगाउने आफ्नो इच्छा रहेको उनले बताए ।
गएको असार १० गते प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सुरुका दिनहरुमा निकै आलोचित बनेका श्रेष्ठ पछिल्लो समय आफ्नो क्विालिटी देखाइरहेका छन् ।
उनको सम्पति कति छ भन्ने उनी आफैलाई पनि थाहा छैन् । चितवनमा १०० औँ विघा जमिन उनको नाममा छन् । ललितपुरमा लिटिल एन्जिल्स स्कुलले चर्चेको जमिन मात्रै अर्बौको छ । उनको थुपै्र अप्पलात तथा सिटीइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु छन् ।